Mpanamboatra sy orinasa maharitra mahatohitra ranomaso | Henghua
Ny lamba matanjaka tsy tenona matanjaka dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny fizotrantsika, indrindra ny lamba tsy tenona mafy.
Ny lamba mitafy mafy tsy tenona dia matetika ampiasaina ao anaty kitapo tsy tenona tanana, mety hitondra zavatra mavesatra tsy misy simba.
Azo ampiasaina hanamboarana vary gony, lafarinina lafarinina aza izy ireo.
Sariaka amin'ny tontolo iainana koa ny lamba ary mihasimba haingana rehefa avy nilatsaka.
(Raha mila horonan-tsary ianao dia mifandraisa aminay)
Satria ny akora vita amin'ny lamba tsy tenona dia polypropylene, ny fahatsapana ny lamba tsy tenona dia mifandraika amin'ny hafanan'ny fitaovana fanodinana. Rehefa avo ny mari-pana, dia mahatsapa ho mafy ny lamba tsy vita tenona vokarina, ary rehefa ambany ny mari-pana, dia malefaka ny lamba tsy tenona vokarina.
Raha mafy loatra ilay lamba tsy tenona, dia ho mora volo kokoa, ary tena ratsy ny fihenjanana. Tsotra be ny vaky. Mifanohitra amin'izany, ny lamba tsy tenona misy fahatsapana malefaka, ny hery mihosotra dia tena tsara ary feno ny hamafisana.
Na izany aza, ny fahalemen'ny lamba tsy tenona dia tokony hamafisina amin'ny mpanjifa araka ny fepetra voafaritra manokana. Ny mpanjifa sasany ohatra ny mpanjifa mpanamboatra kitapo tsy tenona, dia aleony ny lamba miserana mafy, ny sasany manarona, aleony ny fahatsapana malefaka.
Raha matanjaka be noho ny ambaratonga ankapobeny ny fihenjanana dia hahatsapa malefaka kely ilay lamba. Ho fanampin'izany, amin'ny tranga fanaovana pirinty mafana, ny mari-pana amin'ny fanodinana mafana dia tokony haidina ambany mba hisorohana ny lamba ambonin'ilay lamba. Vahaolana iray hafa dia ny fampidinana ny mari-pana rehefa mamokatra lamba tsy tenona izahay hihaonana amin'ny mari-pana fanontana manokana an'ny mpanjifa.
Teo aloha: Manitra
Manaraka: Ny toetran'ny mpamono afo PP Spunbond Nonwoven
Lamba tsy tenona, Fitaovana tsy tenona, Vidin'ny lamba lamba, Lamba tsy vita tenona Polypropylene, Pp lamba tsy tenona, Lamba tsy misy tenona polypropylene Spunbond,